Uyilo kunye nokuPapasha iNcwadi usebenzisa iAmazon KDP | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kuqhelekile ukuba xa sisebenza njengabaqulunqi begraphic sigunyazisiwe iiprojekthi zokuhlela. Kule meko, uninzi lwethu lusetyenziselwa ukusebenzisa i-InDesign, ngakumbi ukuba kunjalo Iincwadi zemizobo okanye upapasho oluqulethe isixa esikhulu sesicatshulwa, kuba yinkqubo quintessential yabahleli babahleli, kwaye leyo isinika ezinye iindlela zokhetho xa kuziwa kulwakhiwo.
Ngokwesiqhelo, kwezi projekthi umsebenzi wethu uya kuncitshiswa ekuyileni incwadi nasekulungiseleleni ifayile eya kushicilelo. Nangona kunjalo, njengoko izixhobo ezingakumbi nangakumbi zifumaneka eluntwini, ngamanye amaxesha umthengi unokucela ukuba upapashe okanye Yila incwadi ngokuthe ngqo kwiAmazon KDP, ukuze akwazi ukuyithengisa ngokwakhe.
I-Amazon KDP (Ukupapashwa ngokuthe ngqo), Ukuba awuyazi, liqonga levenkile ye-Intanethi ekujoliswe kuyo ababhali nababhali bayafuna thengisa iincwadi zakho. Njengokuba ingenguye wonke umntu onethamsanqa ngokwaneleyo ukuba abe nomshicileli ofuna ukupapasha incwadi, esi sixhobo seAmazon sikuvumela ukuba ulayishe umbhalo-ngqangi kwaye uwuthengise ngephepha nokuba uhlobo lwedijithali okanye uhlobo, o icele ukuba iprintwe.
Kodwa ukupapasha incwadi kwiphepha, kuya kufuneka ulayishe umbhalo obhaliweyo kunye Qinisekisa ukuba iboniswe ngokuchanekileyo, ukuba izihloko zibekwe kakuhle, ukuba isiciko senziwe kakuhle, ukuba siyangqinelana nemilinganiselo efunekayo, njl. Abathengi abaninzi bafuna ukuziphepha ezi ngxaki kwaye bakhetha ukuyinika le nkqubo uyilo lwegraphic. Ke Kubalulekile ukuba uyazi indlela yokuphatha eli qonga.
1 Vula iakhawunti
2 Ngenisa umbhalo obhaliweyo wohlobo kunye nokuprinta
3 Ikhava yohlobo
4 Isimbozo soshicilelo oluguqulelweyo
Into yokuqala ekufuneka uyenzile Ukuvula iakhawunti kwiAmazon KDP, usebenzisa i-imeyile kunye neenkcukacha zakho. Ngokwenza njalo, uya kufumana ifayile ye- Iphepha lasekhaya ehambelana ne Ithala leencwadi, kwaye apho uzakufumana amanyathelo ekufuneka uwalandele ukupapasha incwadi.
Icandelo leThala leencwadi kwiAmazon KDP
Ngenisa umbhalo obhaliweyo wohlobo kunye nokuprinta
Inkqubo yokufaka ifayile ye- Inguqulelo ebhalwe ngesandla kwi-Kindle yahlukile kwinkqubo eqhutyelwa yona ingxelo eprintiweyo.
Ngohlobo, ungasebenzisa inkqubo Uhlobo Yenza loo nto yenza ukuba iphepha lifumaneke kuwe. Yenza uhlobo se Khuphela kuqala kwikhompyuter, ngokucofa ukhetho Qalisa ngezixhobo zokwenza umxholo.
Xa ufaka, kuya kufuneka wenze ifayile ye- Iprojekthi entsha evela kwifayile, layisha uxwebhu kwiLizwi yombhalo obhaliweyo kwaye ungenise ngaphakathi. Inkqubo iya kukuvumela ukuba uhlele iiTayitile, imixholo engezantsi, izithuba, ukunikezela imixholo kunye nazo naziphi na ezinye iinkcukacha ngokubhekisele kuyilo. Kubalulekile ukuba usoloko uyijonga kwakhona ifayile ye- Imboniso ukhetho, ukubona ukuba iyakuboniswa njani xa ifumaneka kwintengiso.
Nje ukuba ugqibile ukulungisa ubeko, unga Gcina iprojekthi kwikhompyuter yakho kwaye uyipapashe kamva, okanye unokukhetha ukhetho kwi Shicilela kwaye uyithumele ngqo kwiAmazon KDP.
Ngenguqulelo eprintiweyo, umbhalo wesandla omtyala wona layisha ngePDF kwikhompyuter yakho, kwaye apha unako Sebenzisa uyilo olwenzileyo kwi-Indesign okanye nayiphi na enye inkqubo efanayo. Inye kuphela into ekufuneka uyithathele ingqalelo kukuba ubungakanani befomathi yile I-15,24 cm ububanzi x 22,86 cm ukuphakama, Kwaye ukuba incwadi yakho ineefoto okanye izinto ezifuna ukopha, kuya kufuneka ubale eso sithuba songezelelweyo.
Kindle Yenza iNkqubo
Useto lweManuscript kuhlobo lokuYila
Ngeqweqwe lohlobo lohlobo, IAmazon KDP ineetemplate ezithile ekufuneka wongeze kuyo imifanekiso kunye nombhalo wakho. Nangona kunjalo, kwaye ngakumbi ukuba uyilo, siyacebisa oko layisha ikhava yakho eyilelwe kwi-Photoshop okanye kwi-Illustrator, njengoko uyilo lweetemplate lilinganiselwe.
Ukuba ufaka ikhava yakho, kufuneka ibe kwi Ifomathi yeJPG okanye yeTIFF, enobungakanani obulungileyo be-2560 x 1600 px kunye ne Imowudi yeRGB. Ubunzima befayile ayinakudlula kuma-50 MB kwaye isisombululo esicetyiswayo 300 dpi.
Layisha ikhava kwiAmazon KDP yenguqulo yohlobo
Isimbozo soshicilelo oluguqulelweyo
Isimbozo senguqulelo kufuneka sibe ngaphakathi PDF, kwaye ifayile kufuneka iqulethe Isimbozo, isiciko sangasemva kunye nomqolo, ngokungathi uza kuyithumela kwinkampani yokushicilela. Ukuba ikumbala kucetyiswa ukuba imowudi yi-CMYK, kwaye ukuba imnyama nomhlophe, kufanele ukuba in Ngwevu. Ubunzima befayile yakho ayinakudlula kwi-40 MB kwaye isisombululo kufuneka 300 dpi.
Umyinge opheleleyo ngu 32,8 cm ububanzi x 23,46 cm ukuphakama, ukushiya ukopha ukuba kukho imfuneko. Inkqubo ye- isicatshulwa kufuneka sifundeke, kwaye kufuneka shiya indawo yebhakhowudi.
Ngale nxalenye yenkqubo esele ilungile, into oshiyekileyo yiyo setha ilungelo lokushicilela, i xabiso eza kubelwa kunye nayo yonke into enxulumene nayo idatha yombhali okanye umntu opapasha incwadi.
Ngenisa ikhava kunye nombhalo obhaliweyo kwiAmazon KDP yenguqulo eprintiweyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyilo kunye nokuPapasha iNcwadi usebenzisa iAmazon KDP